एकै परिवारका तीन जनाको मृत्युले गाउँ नै स्तब्ध! - Sabal Post
एकै परिवारका तीन जनाको मृत्युले गाउँ नै स्तब्ध!
तनहुँ – व्यास नगरपालिका–१ निर्मलबस्तीमा एकै परिवारका तीन जना मृतावस्थामा भेटिका छन् । अपाङ्गता भएका १५ वर्षीय छोरा विपीन श्रेष्ठको शुक्रबार तथा आमा ३४ वर्षीया रवीना र अपाङ्गता भएकी ११ वर्षीया छोरी प्रिया आज मृत भेटिएछि यतिबेला गाउँ शोकमा डुबेको छ ।
छोराको घाँटीमा डोरीले बाँधेको जस्तो दाग देखेपछि आमाले हत्या गरी फरार भएको हुन सक्ने प्रहरीले आशङ्का गरे पनि शनिबार आमाछोरी मादीसेती नदी किनारमा मृतावस्थामा भेटिएपछि प्रहरीले घटनाका बारेमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने जनाएको छ ।एकै परिवारका तीन जनाको मृत्युको खबरले यतिबेला गाउँ नै स्तब्ध भएको निर्मल टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष अम्मर भण्डारीले जानकारी दिए। मृतक रवीनाका श्रीमान् हरिकृष्ण भारतीय प्रहरीबाट अवकाशपछि भारतमा नै काम गर्दै आएका छन् । यहाँ भएको घटनाबारे दाजुलाई जानकारी गराइसकिएको उनका भाइ मोहनकृष्णले बताए । रासस/sajhapost
सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्व आज…
व्यक्ति होइन, संस्थाप्रधान कांग्रेस
भर्माचौर झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि आर्थिक सहयोग…